Cantona ayaa xirfadiisa kusoo bandhigay kooxdii markaas soo qaaday horyaalka championship-ka eeLeeds1992dii, waana markii horyaalka Ingiriiska laga bedelay magaciisii hore ee Division One. Si kastaba xidigaan wuxuu ahaa mid laga jecel yahay masraxa riyada.
Ma Ogtahay? Contana ayaa 26 gool ka dhaliyey 29 koox oo uu ka hor yimid wayihiisii Leeds wuxuuna ku guul darreystay inuu shabaqa kazoo taabto Bolton, Leicester iyo Manchester United.
Markii uu Arsene Wenger kala soo wareegy Juventus wuxuu ahaa mid ka ciyara garabka bidix laakiin wuxuu halyeey u noqday kooxdaLondon.
Frank Lampard ayaa loo arkaayey xidig aysan tayadiisu dhamaan waana gool dhaliyaha sedaxaad ee ugu sareeyaChelsea, wuxuu ka dambeeyaa Bobby Tambling iyo Kerry Dixon.
Waxaana lagu xasuustaa inuu 42 gool oo horyaalka ah dhaliyey 2007-08,, Ronaldo ayaa looga yaqanaa Masraxa Riyada sida halyeey Eric Cantona.
Qof walba ayaa u maleynaayey inuu Alan Shearer ku biirayoManchesterUnited markii uu ka tegay Southampton laakiin wuxuu u huleelayBlackburnxilli ay uga mahad celinayeen awooda ninka kooxda iska lahaa Jack Walker, kazoo dhisay kooxdii ku guuleysatay Horyaalka.
Ma Ogtahay? Shearer waa gool dhaliyaha ugu sareeya taariikhda Horyaalka Ingiriiska wuxuuna leeyahay260 gool.
Xabi Alonso ayaa door muhim ah ka ciyaaray kooxdiiLiverpoolee hanatay Champions League xilligii uu hayey Rafa Benitez 2005tii.
Didier Drogba Waa ciyaaryahan kale oo aan bedelkiisa si fudud lagu heli doonin marka la eegoChelsea. Awoodiisa iyo maskax ahaan oo uu istaago booska ku haboon gool dhalinta Waxay u muuqataa mid aan sahal lagu heli doonin. Waxaana asxaabtiisa ay isku kooxda yihiin kula kajami jireen inuu nasiib u leeyahay inuu goolal ka dhaliyo Arsenal.
Petr Cech Waa halyeey goolka u qabta Blues mana ahan mid ay taageerayaasheedu iloobi karaan ka dib wixii uu sanadii hore ka sameeyeyMunich.